Iphephadonga lomdanso lobantwana, yiliphi elizolikhetha?
Iphepha lokudonga labantwana - indlela yokwakha isimo sezinganekwane ekamelweni labantwana?
Ukuklanywa kwendawo egumbini lomntwana kudlala indima ebalulekile, ukugqoka okukhethiwe kahle kanye nokubala kwayo kuthinta isimo semvelo nesimo sengqondo yengane. Iphephadonga labantwana lezindonga kufanele libe ne-eco-friendly, kulula ukulinakekela. Ukukhethwa kwemibala namaphethini kufanele kufanelane nobulili nobudala bomhlali.
Iphephadonga lekamelo lokulala labantwana
Yakha imvelo epholile futhi ejabule endlini yezingane akulula. Ngenxa yalokhu, kukhethwa ukumbozwa kwendonga encane, ingaphakathi ligcwele izesekeli eziphathekayo kanye nefenisha enhle. Ukunquma ukuthi yisiphi iphepha lodonga esingcono kakhulu kubantwana, kubalulekile ukucabangela izithakazelo zengane. Abakhiqizi bakhipha ukuqoqwa, balandela ukuthambekela okudumile emhlabeni we-cinema, imidwebo nemidlalo. Lezi zikhwama ezimibalabala ngezithombe ezifakiwe noma izithombe zama-heroes we-Disney, izilwane, isikhala, izimoto. Umhlobiso onjalo uyojabulisa umcabango wengane, uyomvumela ukuba angenele ezweni lezinganekwane.
Ikhwalithi yezinto ezibonakalayo nokukhethwa kwesithombe kuxhomeke ekubukeni okuhambisanayo ekamelweni. Imikhiqizo enobungozi yizinto ezibalulekile uma uthenga. Iphephadonga lephepha le-nursery liheha ubuhle bokubunjwa kanye nezindleko eziphansi. Izinto ezifakwe amaminerali akwazi ukumelana nomswakama nokushisa okuncane. Iphephadonga lezingane ezingelusiwe liwusizo, kulula ukuhlanza, libe nokuthungwa kokukhululeka. Umzuzu wesibili ukhiye wokukhetha ukudweba nokuthunjwa. Uhlelo oluhle kakhulu lombala wesifazane osemusha yi-peach, beige, emhlophe, ngokumhlophe pink, eluhlaza okwesibhakabhaka.
Okuhlukile okukhangayo kokuhlobisa udonga olugcizelela - amaphephadonga. AmaFairies, amakhosazana, uWinnie the Pooh, i-Little Mermaid, izinqaba zezintambo-ukugcwaliswa okuphelele kwezinto ezingaphakathi kwendawo yomdlalo. Izindonga zezithombe zisetshenziselwa indawo eyodwa, ezinye zimbozwa izikhwama ze-monochrome. Iphephadonga labantwana lezindonga zamantombazane likhethwe iminyaka. Ingane kuze kube yiminyaka emibili imidwebo encane noma i-pastel shades izosondela.
Ngesikhathi esidala ikamelo liba le ntombazane isikhala somuntu siqu kanye nendawo yemidlalo, amaphepha odonga abantwana abesithombe esibucayi ayoba ngokoqobo. Intombazane intsha ingathanda ukuthandana ngothando olubomvu ngezinhliziyo, imibhangqwana enothando, imizwelo enhle yaseParis, izilwane, ubuhlobiso bembali. Izindonga ezihlotshiswe ngezemidlalo zizosiza ingane kunanoma yisiphi isikhathi ukuba uzizwe uthandekile, iyojabula futhi ivuse umnikazi wendawo.
Izingane zamaphephadonga kumfana
Ngokumbozwa kwendonga yanamuhla, kulula ukudala isimo esithandekayo nesimnandi. Uma unquma ukuthi yiliphi iphepha lodonga lokukhetha ekamelweni lezingane lapho umfana ehlala khona, kufanele kucatshangelwe ukuthi isikhala somninikazi omncane senziwe ngokuvumelana nezintshisekelo zakhe. Igumbi lakhe liyizwe lonke lapho ingane ikhula khona, iveza izici zobuntu.
I-palette yama-boyish iluhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza okwesibhakabhaka, oluphuzi, nelolundu Ngaphandle kwephepha, i-vinyl, izambatho ezingenamvubelo, isisombululo esithakazelisayo singase sibe iphepha lodonga emanzini. Kulula ukusebenzisa, awunayo i-seams, iphephile futhi iyasebenza. Zingahlelwa kabusha izikhathi eziningi, ngezikhathi ezithile ukubuyekezwa ngaphakathi kwekamelo. Ku-invoyisi enjalo ingasetshenziswa imidwebo.
Izingane ezisanda kuzalwa zizobe zithulile egumbini, zimbozwe ngokudweba kahle, ezenziwe nge-pastel zemidwebo ngephethini encane. Njengoba ukhula, ungakwazi ukuhlobisa igumbi kunoma yisiphi isitayela, ukuhlobisa izindonga ngezingqikithi zasolwandle ngezikebhe, amafrigates, noma izikhala ezinkanyezi, ama-heroes amaqhawe, izimoto nezindiza, ama-airships. Ngosizo lwamaphephadonga wesithombe, umklamo omibalabala we-orientation ehambelanayo wadalwa.
Amathrekhi okudweba athandwa kakhulu. Amapensela akhethekile kid angawabeka imidwebo, udonga luba yindawo yokwakha kwakhe. Intsha iyothanda ukuzithokozisa kwezitini ngaphezulu, izinto eziqoshwe ngamagrafiti, amabalazwe asezindaweni zasemadolobheni, amabalazwe asendaweni, imibhalo. Ukuphela okuhle kuzokwenza igumbi lomntwana lithakazelise, kumsize adale futhi athuthukise.
Ama-movie ekamelweni lomfana nentombazane
Ingaphakathi lekamelo labantwana bezocansi ezahlukene kufanele libe likhanyayo futhi lijabulise kokubili. Iphepha lodonga labantwana, elenzelwe umfowenu nodadewabo, lingasetshenziswa ukuhlukanisa igumbi zibe yizigaba. Okuphuzi, i-orange, i-blue, i-shades eluhlaza kufanelekile kumfana nentombazane ngesikhathi esisodwa, udinga ukukhetha ngokuvumelana ngokuhlangana kwawo. Izindawo ezihlukahlukene zifakwe umbala ohlukile wephepha lodonga labantwana ezindongeni, ngoba umqashi ngamunye kungenzeka abeke izithombe ezithakazelisayo ngokusho kwezintshisekelo.
Ukuthembeka kwesitayela esivamile salolu gumbi kugcinwa ngenxa yephuzu lezinhlamvu (yin, yang). Isibonelo, ohlangothini ophuzi kukhona izithombe eziluhlaza okwesibhakabhaka, futhi ohlangothini lwesibili - ngokuphambene nalokho. Izinto zokuhlanganisa zingaba amashalofu ajwayelekile. Kuzingane ezindala, kuzodingeka usebenzise ukwahlukanisa noma ikhethini ekamelweni. Lesi simo sikhanyisa okuhle, futhi izingane zijabula.
Amaphephadonga ebantwaneni ngaphakathi
Ukuqedwa kwezindonga ekamelweni lomntwana kufanele kufane nesitayela esivamile salolu gumbi futhi kuthinteke kahle isimo sengqondo somqashi. Iphephadonga elihle labantwana liqukethe imidwebo ethakazelisayo, efanelekayo kubafana noma amantombazane abaneminyaka yobudala. Ukuhlobisa okudumile, ukuhlobisa izimbali, i-geometry, izithombe zezilwane, amaqhawe wezithombe zakho ozithandayo. Okuhle, udonga olulodwa luhlotshiswe ngezithombe ezimibalabala ezimbala, amaphephadonga wesithombe, futhi okunye kushiywe kungahlanganiswa. Mhlawumbe inhlanganisela yezinto zokwakheka kanye nemibala ehlukene.
Iphephadonga eliqinile emtholampilo
Igumbi lomntwana likhethekile, kufanele lijabulise abanikazi abanemibala yabo. Izindonga ze-monochrome zigcwele yonke indawo, zithandwa kunoma isiphi isitayela. Ngosizo lwabo, kulula ukudala isimo esifanele ekamelweni. Kukhona iphepha lodonga labantwana lezindonga nge-pearl luster, ukuthungwa kwephethini. Ngokumelene nesizinda se-monotony, izesekeli, ifenisha nokuhlobisa kuyamangalisa. Ngokuvamile, izikhwama zombala ongashadile zisetshenziselwa ukuhlanganiswa namaphetheni, imidwebo, eveza izindawo zokugcizelela, amapaneli, amaphaneli ngaphakathi. Kuyathakazelisa ukubona inhlanganisela yemibala ehlukile ye-monochrome.
Ukukhetha ngokufanele umthunzi wezingcingo, ungakwazi ukuhlobisa ingane ngensimbi ezokwenza ijabule iso isikhathi eside. Baby pink iphepha lodonga - inketho ethandwayo ukuhlela isikhala siqu for lady kancane. Uma usebenzisa imibala elula, khona-ke lo mthunzi ungajabulisa intombazane kanye nentombazane. Kwabafana, imibala epholile iyasebenza kakhulu.
I-polka amachashazi amafotshi ezingane
Lapho ukuhlobisa igumbi lomntwana, imihlobiso engavamile ivame ukusetshenziswa. Ukuphrinta kwepea kubonakala kulula futhi kungenalutho, kuthinta futhi kujabulise iso. Ivumelana kahle ekamelweni elinjalo, ngoba imibuthano ekhethiwe imibala ekhanyayo, efanayo noma enemibala. Iphephadonga eliphuzi e-nursery, elihlotshiswe nge-peas, libukeka njenge-confetti - i-coquettishly ne-dynamically. Kungenzeka ukuhlanganisa imibuthano, izikwele, amakheji, shading zibe ukwakheka okulodwa. Amaphethini we-Pea ahlangene ngokuphelele ne-background-toned esithambile sesendonga sezindonga. Lo mbala ubukeka unhle, unikeza igumbi lokudlala.
Iziqephu nezinkanyezi ezithombeni
I-geometry ejabulisayo nekhanyayo njengabafana. Iphephadonga le-nursery encane enezinkanyezi liphenduka igumbi libe ngendlala yangempela, ibukeka ikhulise. Zisetshenziswe ephahleni nasezindongeni, ezenziwe nge-blue, blue, yamantombazane - emlandweni we-pink, i-lilac. Izibalo zamaphepha odongeni ezinganeni zezindonga ziyahlukahluka ngobukhulu bezithombe. Kukhona umhlobiso olinganiselwe e-asterisk encane noma ezithombeni ezigcwele ngokuvuselelwa kwemvelo engenamkhawulo, amaplanethi, iMilky Way. Amantombazane kulezi zingoma kukhona ama-fairies, kanye nabafana - ama-rocket nama-flying saucers.
Lapho ukuhlobisa isikhala esiphilayo, ingaphakathi kufanele libe ngabanye. Izithombe zanamuhla ze-3D zithumela isithombe kanye nokujula nokuvama kwayo, mangaza ngeqiniso layo. Phakathi kweziqephu eziningi kukhona amaphephadonga akhangayo ezinganeni, imibono yokuklama ihlukahlukene-i-panorama enemifanekiso, izithombe zokujula kolwandle nezakhamuzi ezingaphansi kwamanzi noma ukungenakunqamuzana kwe-cosmic, imihlaba yemvelo. Bheka kahle imikhiqizo ye-fluorescent, ebumnyameni iphuma neon light, yakha umlingo wangempela ekamelweni.
Iphephadonga elifakwe emanzini
I-geometry yomugqa manje isithandwa kakhulu. Izindonga ezinamathele zinikeza amafulethi aguqukayo, alungise ubukhulu bawo. Iphethini ivulekile, iminyene, ne-hatching noma ngamaphethini aqondile. Iphephadonga elibuhlaza elinamabala emanzini anezimhlophe ezimhlophe - indaba ehle yokuhlobisa igumbi othandekayo kuyo yonke isitayela sezilwandle. Ekamelweni lomntwana, usebenzisa i-geometry, ungakha umklamo ocacile usebenzisa iphethini elungile lemibala ehlukahlukene, noma ungathathi hlangothi kusuka ekudakeni okucashile.
Izithombe ze-Owl ezinganeni
Ikamelo lokulala ingane kufanele liyibeke ekuphumuleni kwekhwalithi. Isikhwama singumgcini wamaphupho, isithombe saso sisetshenziswa kakhulu endaweni yokuhlala kwabantwana. Kulokhu, iphepha lodonga labantwana lisetshenzisiwe. Endaweni yokulala emadongeni kukhona imidwebo ethandwayo enezithombe zamahlumela amahle amahle emagatsheni omuthi. Inyoni ingaboniswa ngamaphoyinti amaningi anemibala, ngezihumusho ezilodwa noma eziningi. Lesi sakhiwo sibheka kuqala futhi sisha.
Wallpapers nezimoto zezingane
Izihloko zezimoto zifanelekile ekuhleleni amakamelo ezinganeni kanye nentsha. Iphephadonga elihlaza okwesibhakabhaka ku-nursery ngezimoto - isisombululo esihle kakhulu sokuhlobisa isikhala somuntu. Iphethini isetshenziswe kwezinye izingxenye zendonga noma ezungeze umjikelezo (uma kungenkulu). Izikhukhula zibonisa izinhlamvu ze-cartoon eyintandokazi "Izimoto", izimoto zezemidlalo, amabhasi, i-jeeps, amathangi, ama-vans amaphoyisa. Imibala ekhanyayo izosiza ekwakheni umklamo othakazelisayo. Isakhiwo esinjalo ezindongeni sizovumela ingane ukuba ihlakulele ingqondo futhi idlale ngokujabula ekamelweni lakhe.
Isikhala samaphephadonga sezingane
Ukuhlobisa odongeni ezindlini zezingane kufanele kube mnandi. Iphephadonga elihle kakhulu lezingane lidala umoya odlala futhi ongakhathazeki ekamelweni. Izindwangu ezinezikhala zesikhala - ukubona okuthakazelisayo. Izinkanyezi ezikhanyayo, amaplanethi akude, ama-satellite, ama-rocket, ama-saucer ezindizayo kanye nezinye izifundo ze-galactic indlela enhle yokuhlobisa isimo esingavamile nesimangalisa ngesilwane esibucayi. Ama-wallpapers wezithombe zesikhala enkabeni enjalo azobukeka enengqondo, futhi imidwebo eqoshiwe enezihloko ezimnandi ziyinkimbinkimbi futhi iyamnandi.
Iphephadonga lezingane ezikhethiwe ngokufanele ezindongeni lizosiza ukuhlela isimo esingenandaba nokunethezeka ngaphakathi. Ukukhethwa okukhulu kwemidwebo nemidwebo yezinto zokwakha, izixazululo zokwakha kuzokwenza kube lula ukukhetha umdwebo wengane kunoma yikuphi ubudala bese wenza umkhathi ojabulisayo ezindlini zakhe. Ukwakhiwa okusemandleni ekamelweni kuvumela ingane ukuba ikhululeke futhi ivikeleke ezweni lakhe elincane. Ngakho-ke, ukumbozwa kwodonga lwendonga kuye kwaba yinto ejwayelekile yokuqedela amakamelo abafana namantombazane.
Ikamelo elincane-igumbi lokuhlala
Itafula elingaphansi kombhede wendwangu
I-Gypsum plaster - ukucaciswa kobuchwepheshe
Iphethini yeglasi ekhishini
Ama-movie ekamelweni lamantombazane - imithetho eyisisekelo yokukhetha i-shades yomklamo ophumelelayo
Izinkuni zomlilo ezisekhaya
Isabelo se-Shelf ekwakheni indawo
Ukuma kwe-TV kwisitayela sesimanje
Indlela yokwenza ukwahlukanisa ekamelweni ngezandla zakho?
Isihlalo Sokugcina Isihlalo Esihlaza
Ukukhuhlane kwamathumbu emantwaneni - ukwelashwa
Yini amanzi e-murky aphupha ngawo?
Umbono we Earth flat - amaqiniso wangempela
Amama omama: "ukuhlanganisa" ukuhlolwa kwesithombe!
I-Puree yezingane ezingaphansi konyaka owodwa
Izicathulo zase-Classical for women - izinhlobo, models, yini ukugqoka?
Isikhungo sihluke kanjani enyuvesi?
UWill Smith: "Ukuphila nomfazi akuyona ushukela!"
Isiraphu ye-artichoke yaseJerusalema - okuhle nokubi
I-Kvasshenye aubergines - zokupheka okumnandi nezingavamile zokulungiselela ukudla okulula okunamnandi
Ukuhlinzwa kwe-Coronary bypass
Amabhayisikobho mayelana nokukhulelwa nokubeletha
Ukuqashelwa kobuhlobo ngaphandle komshado
Umunwe we-Kylie Jenner wawusendaweni ebonakalayo!
I-embassy yaseSpain e-Astana
Amakhowe ngaphansi kwesaladi lesikhumba
Amaphepheni ekamelweni labantwana lentombazane